ယူကေရဲ့ရေကာတာနဲ့ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs VII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ယူကေရဲ့ရေကာတာနဲ့ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs VII
ယူကေရဲ့ရေကာတာနဲ့ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs VII
Posted by Kyaemon on Oct 19, 2012 in Business & Economics, Education, Know-How, DIY, Photography, Society & Lifestyle, Travel |5comments
ရေကာတာတွေနဲ့ အတူ အခြားတော အနေအထား ရှုခင်းတွေကိုပါလိုက်ကြည့်ရအောင်
Grimwith ရေကာတာ က ၁၈၆၄ ကတည်ဆောက်ခဲ့လို့ ၁၄၈ နှစ်ကြာပါပြီ
Dam…. | Flickr – Photo Sharing!
Overflow | Flickr – Photo Sharing!
Slide show ဆလိုဒ်ရှိုးပါ
Search results for GRIMWITH RESERVOIR
Vyrnwy ရေကာတာ က ၁၈၉၂ ကတည်ဆောက်ခဲ့လို့ ၁၂၀ နှစ်ကြာပါပြီ
Lake Vyrnwy Dam | Flickr – Photo Sharing!
ဒီရေကာတာကို ကျောက်တုံးကြီး နဲ့ဆောက်တာဟာ ကမ်ဘာမှာ ပဋ္ဌမ ဦးဆုံးလို့ဆိုဘဲ
The first stone-built dam in the world, according to Wikipedia:
Search results for vyrnwy dam
Lake Vyrnwy | Flickr – Photo Sharing!
Flickr: Search Stephen D Harper’s photostream
Search results for lake vyrnwy dam
Abbeystead ရေကာတာဆည် က ၁၈၈၁ ကတည်ဆောက်ခဲ့လို့ ၁၃၁ နှစ်ကြာပါပြီ
Crest of the spillway, Abbeystead Reservoir, Over Wyresdale, Forest of Bowland, Lancashire, UK | Flickr – Photo Sharing!
Crest of the spillway, Abbeystead Reservoir, Over Wyresdale, Forest of Bowland, Lancashire, UK
ဟုတ်ကဲ့၊ ရေထဲဆင်းပြီး ခဲရာခဲဆစ် ရိုက်ရတာပါ
Yes, taken from in the water
Craig Coch ရေကာတာ က ၁၉၀၄ ကတည်ဆောက်ခဲ့လို့ ၁၀၈ နှစ်ကြာပါပြီ
Craig Goch dam, Elan Valley, Powys, Wales. | Flickr – Photo Sharing!
Victorian Dam | Flickr – Photo Sharing!
ဝီတိုရီရာ ဘုရင်မ လက်ထက် က ဆောက်လုပ်တာဖြစ်လို့ နှစ်ပေါင်းရာ ကျော်နေပါပြီ
We hiredacar, foundaB&B and set off for3nights away in Wales with little other planning. We didn’t realise the main attraction of the area were old dams. It did makeaunique day touring around them.
“The dams and reservoirs of the Elan Estate are situated within an area of outstanding scenic beauty. They providealasting amenity in their own right for visitors to enjoy.
However, it should be remembered that the dams were built to provide foravery basic need….water for the people of Birmingham.”
(from the Elan Valley web site www.elanvalley.org.uk/dams-reservoirs/)
Since 1997, the dams also generate electricity (about 4.2 megawatts).
ဒလောက် သက်တမ်းရင့်နေတာ ဘာအပျက်အစီးမှမရှိတာ အံ့သြစရာ မရှိပါ
ကျနော်တို့ရဲ့ ဘားမား မှာလဲ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က အဆောက်အအုံတွေ
လမ်းတံတားတွေ ခုထက်ထိတိုင်အောင် ကြံ့ခိုင်ဆဲ
ဘားမားက အင်ဂျင်နီယာ လက်ရာအနေအထားကတော့
ဓါတ်ပုံ ခန့်ခန့်ကြီးတွေ ခဏခဏ ကြည့်ခွင့်ရနေလို့
အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား ကျေးဇုး တင်ရှိပါတယ် လို့
တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီးကို အန်ကယ်ဆမ်က အပြတ်တီးတော့မည်တဲ့။ သစ်ထူးလွင်မှာ တင်ထားတာ.. ပြေးပေတော့ ကြေးမုံဂျီးရေ မဟာတံတိုင်း ရှည်သ၍…. ဆုံးသွားရင် အစကို ပြန်ပြေးလာခဲ့။ ဦးကြောင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ တပုံးနဲ့ အမောပြေတိုက်ဖို့ စောင့်နေမယ်။
စစ်အင်အားကြီး အမေရိကန် အပါအ၀င် အာရှနိုင်ငံ အချို့ပါဝင်သော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ‘ကော်ဘရာဂိုး’ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ကို လေ့လာရန် မြန်မာနိုင်ငံ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ဖိတ်ခေါ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Reuters သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အရမ်းမိုက်တာပဲ ………… ခုမှစုစည်းပီးမြင်ဖူး